Ma jiraan wax qarsoodi ah oo ku saabsan kor u qaadista boggaga dagan guryaha?
Haddii aad tahay qof hantiilaha ah, iibiye guri, ama xirfad ganacsi, waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inaad abuurto bogag dherer ah macaamiisha suurtagalka ah si aad ugu guurto meel u dhow. Qoridda bogga soo degitaanka ah ee soo baxaya hogaamiyaashu ma aha mid adag sida qofku u fakarayo. Maanta, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo abuuro bogagga soo degaya guryaha sare.
Talooyin loogu talagalay dhisida iyo kor u qaadista boggaga gaaban ee hantida maguurtada ah
. Hubi in boggaaga soo degayaa uu leeyahay cinwaano cad oo kooban oo fudud oo xiiso leh inuu akhriyo - aspire pockex coil change. Ku fududee adigoo isticmaalaya luqad sax ah. Hubi in cinwaankaagu uu ku siiyo akhristayaasha macluumaadka ay raadinayaan, xaqiijinayaan in ay ku sugan yihiin goobta saxda ah iyo si sahlan loo. Iyadoo tirakoob ay muujinayaan, cinwaanka bogga ugu fiican ee soo degaya waxay wax ka qabtaan faa'iidada dareenka ah ee ganacsiga aad la leedahay. Khabiirada xajmiga ah waxay soo jeedinayaan inay ku xiranyihiin xayeysiiskaaga hore, email ama blog oo leh cinwaanka bogga. Sheekada dheer ee gaaban: sii macaamiishaada waxa ay rabaan, oo waxay ku soo celin doonaan raalligelinta.
Arrimaha shakhsi ahaaneed
Sida caadiga ah, hantiilayaasha sare ayaa ogaanaya dhagaystayaashooda gudaha iyo dibadda. Maalgashi ku samee si aad u ogaato xeeladaha ama warbaahinta ay doortaan. Tani waxay ku siin doontaa fahan wanaagsan oo ku saabsan fariimaha lagu siinayo iyaga iyo habka loo maro martida marka ay noqdaan macaamiisha buuxa. Bixinta macaamiisha macluumaadka ay doonayaan waxay kaa caawinayaan inaad sii wado tartankaaga.
Tilmaamo dhisaya kalsoonida
Tijaabada waa aalad awood badan oo kaa caawin karta inaad kor u qaaddo boggaga dagan guryaha. Markaad dooranayso markhaatiyaal, raac tilmaamahan:
Dooro kuwa ugu qiimaha badanaaya kuwa aad door bidayso;
Isticmaalaan muuqaalada marka ay suurtagal tahay - sawirada iyo fiidiyoogu waa hab aad u wanaagsan oo lagu dhisi karo kalsoonida oo aad u qabato fiiradaada dhagaystayaasha;
Dooro sharafyo kuwaas oo ay ku jiraan nambarro gaar ah ama faahfaahin kaa caawinaya rinjiga sawirka macaamiisha.
Waa arrin aad ugu habboon inaad ku daro CTAs gudaha bogaga soo degaya. CTA waa meesha ugu dambeysa ee isdhexgalka iyo fursada ugu dambaysa ee aad ku soo celin karto martidaada. Isticmaal talaabo-ku-dhaqaaq ku saabsan bogga soo degaya, isticmaal taxadarrooyinka soo socda:
Tixgeli badhanka weyn ee midabka isha. Hubso in ay ka gudubto imtixaanka cadaadiska si aanad u isticmaali karin.
Ka hel hal-abuur. Qofna ma helo jazzed ilaa 'naga soo wac. 'Ka dhig CTA-gaaga qanciya oo xiiso leh. Xusuusi akhristaha waxa ku jira iyaga.
Xoogga saar hal tallaabada xigta ee aad rabto in macmiilkaagu qaato. Weligaa ha ku mashquulin booqdaha fursado kala duwan ama dalabyo kala duwan. U sheeg astaamaha wixii xiga ee soo socda: Nala soo xiriir. Saxeex. Hadda Heli.
Xasuuso, boggaga soo degaya oo dhan waxay ku saabsan yihiin macaamilka marka hore. Sannadka 2017, waxaa jira fursado badan oo loogu talogalay ra'yiga doonaya in ay qaataan hab gaar ah ee bogga soo degaya. Sidaa darteed, waxaad xor u tahay inaad ka baxdo heerarka ka baxsan oo aad ku raaxeyso. Ilaa intaad macaamiishaada horey u dhigtay, waxaad hubaa inaad ku guuleysato.